मोरङको कुन स्थानीय तहमा को को छन् मेयरका आकांक्षी ? — Samyantra.com
गृहपृष्ठ » बिशेष, मुख्य खबर → मोरङको कुन स्थानीय तहमा को को छन् मेयरका आकांक्षी ?
March 21, 2017४२६९ पटक
ईश्वर भट्टराई, विराटनगर / स्थानीय तह पुनर्संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै मोरङ स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा बढेको छ ।
१९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख दलहरू चुनाव केन्द्रित विभिन्न अभियान चलाइरहेका छन् । एकातिर चुनावी अभियान चलिरहेको छ भने अर्काेतिर स्थानीय तहमा मेयर तथा अध्यक्षको चर्चासमेत शुरू हुन थालेको छ ।
एक उपमहानगरपालिका र ८ नगरपालिकामा मेयर तथा ८ वटा गाउँपालिका अध्यक्षमा कुन पार्टीबाट कसकसले टिकट पाउलान्, कसले चुनावमा जित्ला, कुन वडामा कसको बर्चस्व रहला भन्ने विषय चोक, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल र गाउँघरमा बहस हुन थालेको हो । चुनावले नेतालाई छोएको छ नै जनतालाई पनि डेढ दशकपछि हुन लागेको निर्वाचनले उत्साह थपेको छ ।
बिराटनगरमा कसको अबस्था कस्तो ?
मुलुककै दोस्रो ठूलो शहरको रूपमा रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिकामा मेयरका लागि दर्जनभन्दा बढी आंकाक्षी देखिएका छन् ।
विभिन्न पार्टीबाट दर्जन आकांक्षी देखिएपनि
विराटनगरमा कांग्रेस र एमालेबीच नै मेयरमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । त्यसो त मधेसी समूदायको बाहुल्यता रहेकाले मधेशवादी दल एकीकृत भएर राम्रो उम्मेद्वार दिन सके ठूला दललाई काउण्टर भने दिन सक्छन् । तर त्यस्तो सम्भाबना कम छ ।
यस्तै राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकरण भएकाले राप्रपाका उम्मेद्वारले पनि ठूला पार्टीका उम्मेद्वारलाई काउण्टर दिन सक्छन् । त्यसैले
यहाँ मेयरका लागि राप्रपा र मधेसी दल निर्णायक
प्रदेश नं. १ को केन्द्रको रूपमा रहेको विराटनगरमा कांग्रेसका तर्फबाट मेयरका लागि अहिले दर्जन आकांक्षी देखिएका छन् । विराटनगरको मयेरमा विशेषगरी कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा,
नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले आआफ्ना पक्षकालाई मयेर र उपमेयरमा टिकट दिलाउन लविङ शुरू गरेका छन् । मेयरमा चुनाव जित्न जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनै पर्ने भएकाले पनि मेयरको टिकट दिदाँ धेरै सोच विचार गरेर दिनुपर्ने त्यहाँका पुराना नेताहरूको धारणा छ ।
मधेसी समूदायको बाहुल्यता रहेको विराटनगरमा पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट बसाई सरेकाहरूको बाहुल्यता पनि मधेसी समूदायकै हाराहारीमा छ । त्यसैले पनि मधेसी र पहाडी समूदायको सन्तुलन मिलाएर टिकट दिलाउनै पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
मेयरका लागि अहिले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला, भीम पराजुली, नागेश कोइराला, विश्वनाथ रिजाल, फुलकुमार लालवनी, रूक्मिणी कोइरालालगायत आकांक्षी छन् । उपमेयरका लागि कांग्रेसबाट प्रमिला थापा, रेखा पराजुली लगायतको चर्चा छ । त्यसैगरी एमालेबाट सागर थापा मेयरका दावेदार छन् । अर्काेतर्फ पार्टी अध्यक्ष विनोद ढकाल आफै उठ्ने मनस्थितिमा नभएपनि उहाँलाई पार्टीभित्र कार्यकर्ताले मेयरका रूपमा दर्शाएका छन् । तर, ढकालले भने महेश रेग्मीलाई प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । एमालेबाट पनि उपमेयरमा तीनजना महिला दावेदार छन्। सावित्रा रेग्मी, विमला घिमिरे र शिल्पा कार्कीमध्येबाट एकलाई एमालेले उपमेयर बनाउने सम्भावना छ ।
माओवादी केन्द्रले मेयरमा नगर इन्चार्ज भोगेन्द्र
यादव र उपमेयरमा नमिता न्यौपानेलाई उम्मेद्वार
बनाएको छ । न्यौपाने नगर संयोगक हुन् ।
उता साना राजनैतिक दलको खासै भूमिका नभएपनि मधेशबादी दलहरूको यसपटक सशक्त भूमिका हुन सक्छ ।
गत संविधान सभाको नगरभित्रको मतको हिसाब गर्ने हो भने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालपनि विराटनगरमा शक्तिशाली छ । मनोनित मेयर भएका प्रल्हाद साह सो पार्टीबाट असन्तुष्ट भई बाहिर रहेको अबस्थामा केदार कोइराला पनि राप्रपाका शक्तिशाली नेता हुन् ।
विराटनगर उपमहानगरपालिका कांग्रेसको प्रभाव भएपनि ०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमालेले मेयर र उपमेयर दुबै पदमा जित निकालेको थियो । एमालेका तर्फबाट रमेशचन्द्र पौडेलले कांग्रेस तर्फका मेयरका
उम्मेदवार अमृत अर्याललाई २५ सय बढी मत अन्तरले पराजित गरेका थिए भने उपमयेरमा पनि कांग्रेसका उपेन्द्रकान्त लाललाई एमालेका भुराज राईले पराजित गरेका थिए । एमाले कमजोर रहेको विराटनगरमा कांग्रेसको पल्ला भारी रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
उर्लाबारीमा को – को ?
उर्लाबारीमा पनि दर्जन आकांक्षी पूर्वी मोरङको केन्द्रबिन्दू रहेको उर्लाबारी नगरपालिकाका पनि मेयर बन्न नेताहरूको दौडधुप शुरू भएको छ ।
मेयरका लागि कांग्रेसमा भन्दा एमालेभित्र
बढी आकांक्षी देखिएका छन् । नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट शक्तिशाली उम्मेद्वार मोरङ क्षेत्र नं. ९ का सभापति खड्ग फागो, नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य सीता कार्की, समाजसेवी भोलामान श्रेष्ठ, उर्लाबारी नगरसभापति बीरवल थापा र समाजसेवी जयधर्म आचार्यको नाम चर्चामा छ । यस्तै, एमालेबाट क्षेत्र नं. ९ अध्यक्ष गंगाप्रसाद बास्तोला, क्षेत्र नं. १ सचिव उमाकान्त गौतम,
जिल्ला सदस्य अग्नी भट्टराई, मीना पौडेल,
पूर्वसचिवालय सदस्य भूपालसिंह जिमी, मानबहादुर श्रेष्ठ, क्षेत्र नं. ९ सल्लाहकार पुष्प ढकाल, बलबहादुर घिसिङ, एमाले उर्लाबारी इन्चार्ज गंगा खरेल, रूद्रबहादुर तामाङ, सूर्य गुरागाई चर्चामा छन् । यस्तै, यूवाहरू डिल्ली खतिवडा र रूवेन श्रेष्ठ पनि यूवाहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्दै दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट नगरअध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल, उद्योग वाणिज्य संघ उर्लाबारी अध्यक्ष चन्द्रबहादुर भट्टराई ‘भरत’को चर्चा रहेको छ ।
उता, माओवादी केन्द्रभित्र सन्तुलन मिलाउन हिरालाल देवकोटाको नाम चर्चामा छ ।देवकोटा नागरिक समाज उर्लाबारीका अध्यक्षसमेत हुन् ।
यस्तै, राप्रपाबाट पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दयाराम
भट्टराईको नाम चर्चामा छ ।
उर्लाबारी नगरपालिका, राजघाट गाविस र मधुमल्ला ७, ८ र ९ समावेश गरेर उर्लाबारी नगरपालिका बनाइएको हो । आदिवासी जनजाति समूदायको बाहुल्यता रहेको नगरपालिकाको मेयरमा चुनाव जित्न जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनै पर्ने भएकाले पनि मेयरको टिकट दिदाँ धेरै सोच विचार गरेर दिनुपर्ने पुराना नेताहरूको धारणा छ । नगरपालिकामा झण्डै ४० प्रतिशत जनजाति बाहुल्य छ । त्यसैले पनि जनजाति र राजघाटलाई समेटेर टिकट दिलाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिन्छ ।
पथरीशनिश्चरेमा को को छन् चर्चामा ?
यसैगरी पथरीशनिश्चरेमा पनि झण्डै २० वर्षमा हुन
लागेको चुनावमा मेयरका उम्मेद्वारको चर्चा शुरू भएको छ
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको मेयरमा विशेषगरी अन्य पार्टीका तुलनामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलका आकांक्षी बढी देखिएका छन् । कांग्रेस र एमालेबाट मेयरमा उम्मेद्वार बन्न खोज्नेहरूले खुलेर भन्दै हिँड्न नसके पनि आफ्ना नजिकका कार्यकर्तामाझ मेयरको उम्मेद्वार बन्ने संकेत गरेका छन् ।
साविकको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका र हसन्दह गाविस समावेश गरेर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनेको हो । विगतमा पथरी तथा शनिश्चरे समावेश गरेर नगरपालिका निर्माण भएको थियो । त्यसैले यहाँ साविकका तीन गाविसका नेताहरू मेयरमा आकांक्षी देखिएका छन् । जसले गर्दा आकांक्षी धेरै छन् ।
पथरीशनिश्चरेका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूमाझ नगरको मेयरको उम्मेद्वारीको लागि ४ जनाको नाम चर्चामा ल्याएका छन् । कांग्रेसका पुराना तथा नयाँ
कार्यकर्ताहरूले मेयरको उम्मेद्वारको लागि माधव
कोइराला, पर्शुराम कार्की, गणेश खड्का, बद्री
निरौलाको नाम चर्चामा छ । यस्तै, उपमेयरका लागि रमा शर्मा दाहाल, कविता पराजुली, चन्द्रकला राई, चन्द्रकला चेम्जोङ चर्चामा छन् । नेविसंघ पृष्ठभूमिबाट आएका कोइराला कांग्रेस पथरीशनिश्चरेका स्थानीय चन्दादाता हुन् । व्यापारीसमेत रहेका कोइराला नै सशक्त दाबेदार रहेको एक पक्षका कार्यकर्ता बताउँछन् । नेविसंघ पृष्ठभूमिबाटै आएका खड्का पनि सशक्त दाबेदार हुन् ।
खड्का हाल क्षेत्र नं. २ का सभापतिसमेत हुन् । यस्तै, कार्की पथरीशनिश्चरे नगरविकास समिति अध्यक्ष र बन्द्र निरौला महासमिति सदस्य हुन् । उता दाहाल महासमिति सदस्य, पराजुली पथरी उद्योग वाणिज्य संघ उपाध्यक्ष, राई
क्षेत्रीय प्रतिनिधि र चेम्जोङ अन्तरपाटी महिला सञ्जाल पथरीशनिश्चरे अध्यक्ष हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका क्षेत्र नं. २ का सभापति गणेश
खड्काले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वडादेखि कांग्रेसले चुनावी अभियानलाई तिब्रता दिएकाले वडादेखि कांग्रेसको पोजिसन मजबूत रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालीकांग्रेसजस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक र ठूलो पार्टीमा नगरको मेयरजस्तो पदमा पार्टीमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूबाट एक खालको आकांक्षा व्यक्त गर्नु स्वभाविक रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै, नेकपा एमालेबाट पनि नगरपालिकाको मेयरमा धेरै जनाले इच्छा जाहेर गरेका छन् । चियापसलेदेखि विभिन्न चोकहरूमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले पनि नगरपालिकाको
मेयरमा ४ जनाभन्दा बढीको नाम लिएर चर्चा गर्न शुरू गरेका छन् । एमाले कार्यकर्ताका अनुसार एमाले पार्टीबाट मेयरको आकांक्षीमा बाबुराम ऐङ्देन, किसोर राई, मोहन न्यौपाने, मोहन तुम्बापोको नाम चर्चामा छ । ऐङ्देन एमाले पथरी गाविस पूर्व अध्यक्ष हुन् भने राई वर्तमान जिल्ला सदस्य हुन् । यस्तै, बौद्धिक सर्कलका न्यौपाने २०५४ सालमा शनिश्चरे गाविस अध्यक्षमा
निर्वाचित हुँदा तुम्बापो पथरीमा निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट जहरमान लिम्बू, यसोदा
खतिवडाको नाम चर्चामा छ । लिम्बू शनिश्चरे गाविसका तत्कालिन उपप्रधानपञ्च हुन् ।
लेटाङमा पनि आकांक्षीकै चर्चा
उत्तरीमोरङको लेटाङभोगटेनी नगरपालिका, जाँते वडा नं. १,२,५,६,७,८,९ र वारंगी गाविस समावेश गरेर लेटाङ नगरपालिका बनाइएको हो ।
क्षेत्र नं. ९ अन्तरगत पर्ने यस नगरपालिकामा गत संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका
उम्मेद्वार डिकबहादुर लिम्बू निर्वाचित भएका थिए । हाल जिल्ला सभापतिसमेत रहेका सांसद लिम्बू लेटाङ नगरपालिकाकै भएका कारण यस नगरपालिकाको निर्वाचनलाई कांग्रेसीजनले महत्वकासाथ लिएका छन् ।
उता एमालेले तत्कालिन जाँते तथा लेटाङ गाविस हुँदा विजयी किल्लालाई पुनः फर्काउन लागिरहेको छ । जसले गर्दा नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र एमालेबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
कांग्रेस कार्यकर्तामाझ नगरपालिकाको मेयरका लागि नगरसभापति राजकुमार लामा, महासमिति सदस्य ईश्वरी कोइराला, शंकर राई, सुभद्रा भट्टराई, महाधिवेशन प्रतिनिधि नन्दी खतिवडा, पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि इन्द्र माबुहाङ, लेटाङभोगटेनी नगर विकास समिति अध्यक्ष
दिपकचन्द्र राईको नाम चर्चामा रहेको छ । यस्तै,
एमालेबाट घनश्याम खतिवडा, उपेन्द्र घिमिरे, भूपेन्द्र लावती, कृष्णमाया तिम्सिना, शान्ति पाख्रिनको चर्चा छ ।
दुई पटक तत्कालिन लेटाङ गाविसका अध्यक्ष बनेका खतिवडा गत संविधानसभा निर्वाचनमा डिकबहादुर लिम्बूसँग पराजित बनेका थिए । यस्तै, घिमिरे पनि दुई पटक तत्कालिन जाँते गाविस अध्यक्ष बनेका हुन् । उता माओवादी केन्द्रबाट एकमात्र आकांक्षी गोपाल नेपाली रहेका छन् ।
बेलबारी नगरपालिमा कांग्रेसबाट महासमिति सदस्य महेन्द्र सुवेदी, बेलबारी पूर्वसभापति
राजकुमार लिम्बू, जिल्ला सदस्य मानबहादुर लिम्बू चर्चामा छन् ।
एमालेबाट डीपी राई, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, इरान राई, राजकुमार बस्नेतको चर्चा छ । दुवै राई विद्यालय सञ्चालक हुन् । माओवादी केन्द्रबाट तिलक राई, पर्शुराम सुवेदी, रामप्रसाद राई, पुष्प चौधरीको चर्चा छ ।
यस्तै, कानेपोखरी गाउँपालिकामा पनि अध्यक्षका उम्मेद्वारको चर्चा शुरू भएको छ ।
साविकको वयरवन, केरौन र होक्लाबारी गाविस समावेश गरेर कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्षमा विशेषगरी अन्य पार्टीका तुलनामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलका आकांक्षी बढी देखिएका छन् । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूमाझ गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेद्वारीको लागि ३ जनाको नाम चर्चामा ल्याएका छन् । कांग्रेसका पुराना तथा नयाँ कार्यकर्ताहरूमाझ मेयरको उम्मेद्वारको लागि पूर्व केरौन सभापति तीर्थ कोइराला, जिल्ला सदस्य सूर्यमा राई र कीर्तिमान मादेन, पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि देविबहादुर भण्डारीको नाम चर्चामा छ ।
यस्तै, एमालेबाट जिल्ला सदस्य ताराबहादुर काफ्ले, क्षेत्र नं. २ सदस्य हेमचन्द्र भण्डारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीको नाम चर्चामा रहेको छ ।
उता माओवादी केन्द्रमा सूर्यबहादुर धिमालको चर्चा रहेपनि कांग्रेससँग सहमति हुने माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताको भनाइ छ ।
कोसीहरैचा र सुन्दरदुलारी मिलाएर बनाइएको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा मेयरका लागि कांग्रेसबाट शिव ढकाल, लोकप्रसाद संगौला, गोपाल थापा र चैतन्य सापकोटाको नाम चर्चामा छ । त्यसैगरी नेकपा एमालेबाट अजम्बर राई, केदार गुरागाई र अर्जुन अधिकारी र पितकुमार श्रेष्ठको चर्चा छ ।
माओवादी केन्द्रबाट नवराज चापागाई, मित्रसेन योञ्जन र कुमार राई मेयरको उम्मेद्वारका लागि चर्चामा छन् ।
नयाँ संरचनाअनुसार सिजुवा गाविस एवं इटहरा गाविस, साविकको बरंडगा गाविसका १, ४, ५ र ७ नम्बर वडाहरू, झुर्किया, महादेवा, गोविन्दपुरका १,३,४,७ वडा मिलाएर रतुवामाई नगरपालिका निर्माण गरिएको हो ।
रतुवामाई नगरपालिको मेयरमा नेपाली कांग्रेसबाट मोरङ क्षेत्र नं. १ का सभापति नागेश्वर सिंह, खड्ग चुम्वाङ र रविन राईको नाम चर्चामा छ । एमालेबाट विश्वनाथ राय, रूपनारायण मिश्र, मालती सुब्बा, शिवनारायण राजवंशी र गोपी चापागाईको नाम चर्चामा छ । रतुवामाई नगरपालिकाको मेयरमा माओवादीबाट प्रकाश पौडेल, सुनिल सिंह चर्चामा छन् ।
केराबारीमा नवीनकाे चर्चा
त्यसैगरी पाटी, सिंहदेवी, याङ्शिला, केराबारी र भोगटेनीका केही वडा मिलेर बनेको केराबारी गाउँपालिकामा मेयरका लागि एमालेका नवीन थापा मगरको नाम सबभन्दा बढी चर्चामा छ ।
नेपाल आए है भारतीय ‘गुगल ब्वाइ’